Aridị Sari Na-enyere Gị Aka Inwu Na-enwu Oge Oge Agbamakwụkwọ A - Agba Style
Aridị Sari Na-enyere Gị Aka Inwu Na-enwu Oge Oge Agbamakwụkwọ A
Sari Trends Help You Shine Bright This Wedding Season
Ofwa nke sari na ọnọdụ bụ mercurial. N'adịghị ka ndụ, naanị oge mgbe a bịara n'ihe gbasara mgbanwe bụ mgbanwe. Omume ịhụnanya nke India na yaadị isii malitere site na ntọala ya na akwa mara mma. Elegdị mma ọ bụla n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ ụdị ọ bụla yana ya na ntụgharị ya na-eme ka sari kwesịrị ekwesị maka oge ọ bụla, site na ndụ kwa ụbọchị ruo ọtụtụ ememe.
Echiche nke sari maka nwanyị India nke oge a bụ nke sitere na ọdịnala na nkwenye onwe ya siri ike n'otu oge. Ọ bụkwa otu nke nabatara milieu. Kemgbe ọtụtụ afọ, e nyela ihe nketa ihe nketa dị ka ọtụtụ puku afọ na-achọta ụzọ na-adọrọ mmasị na nke pụrụ iche iji mee nke ha. Ebumnuche ahụ enwetala oge nke oge a pụrụ ịhụ na mpempe akwụkwọ siri ike na ihe ịchọ mma dị arọ.
Okpokoro na usoro ịwụnye sari nwere ike bụrụ ihe na-eyi egwu. Ma nke ahụ bụ ịma mma nke evolushọn na echiche ọhụrụ. Site na saris ndị ewuru ewu, uwe elu nwanyị na-etinye aka na yaadị isii a na-emebu ya na dhoti style saris, akwa sari na akwa sari, enwere nhọrọ na-enweghị isi na-adị mfe na obere nyocha. Stylesdị ndị a bụ nzaghachi maka mkpa nke oge. Uwe mkpuchi ogologo ogologo nke ejiri belt kee bụ ụdị ọzọ a na-eji ejiji ejiji nke ndị a ma ama na ndị ọzọ nabatara. Ime mgbanwe nke uwe a dika oge ya si di bu ihe puru iche.
Pịgharịa n'okpuru maka ụfọdụ usoro ịgba gburugburu iji eyi oge agbamakwụkwọ a.
Sheer E Bipụtara Sari
Nke a dị ka Kareena Kapoor-Khan ka ọ na-enweta. Ọdịdị aghụghọ 'Bebo' nke eji ọla edo edo edo edo bụ nnabata nnabata anyị ga-atụ anya n'aka ya naanị. Ngwakọta pastel a na-eme breezy zuru oke maka ememme ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ ụmụ nwanyị na-agba akwụkwọ brunch.
Bouncy ruffles jikọtara ọnụ na uwe elu nwanyị nke Deepika bụ ụdị OTT anyị na-achọ.
’Snye na-eme ya dị ka Karisma? Ọ dịghị onye, ​​kpomkwem. Na ya iche iche ejiji uche na ya dolled-elu anya, ọ bụ onye na-achọ mmụọ nsọ ma ọ agbụrụ agbụrụ ma ọ bụ ike suiting.
Na-enwu na Sequins
Obi ụtọ nke bollywood dị oke mma na nke a.
Bollywood fav Shraddha Kapoor na-eburu paithani a na amara.
Priyanka chopra -Jonas
Iwu nke uwe aka nke India na-enwu n'ime akwa siliki a nke Priyanka na-eyi. Agba agba bụ ume ọhụrụ.
Sari Na A Kurta
Kriti m na-ekwu
Maka ụmụ nwanyị nọ ebe ahụ na-ahọrọ nnwere onwe nke kurta kamakwa hụ sari n'anya, Kriti Sanon nke a bụ ezigbo mma maka gị.
Ipdị ipdị: Jiri nlezianya mezue anya nke ndị sneakers maka nkasi obi kacha mma!
Tinye eriri na sari dị ka Shilpa Shetty-Kundra maka anụ ahụ!
Gaa Ogologo ụkwụ
Gbanwee ya site na ịnwale ogologo sari ma mezue mkpokọta ahụ na ikiri ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ.
Ọzọkwa Gụọ: Oge a, Tinye Mmelite Ọhụrụ Na Uwe Egwuregwu Ndị Na-ewu ewu
ogwe aka maka ụmụ agbọghọ
afọ ọhụrụ afọ nkiri
usoro ọgwụgwọ nke ntutu maka ọdịda ntutu
nri India kacha mma maka nri abalị
otu esi egbochi ntutu daa n'ụlọ
eji mmiri soda maka ihu